Lihlehlile elomshayeli wesibhicongo sase Fezokuhle | News24
Lihlehlile elomshayeli wesibhicongo sase Fezokuhle
KUBUKEKA kusekude ukuqala kokuqulwa kwamacala abhekene nomshayeli weveni elalithwele abafundi base Fezokuhle Primary School elaphaphalaza langena emzini womuntu kwashona abafundi abayisishiyagalombili.
Ngesikhathi uLungile Mthimkhulu (33), evele kafushane enkantolo yesiFunda eMgungundlovu ngoLwesithathu olwedlule, icala lakhe liphinde lahlehliselwa umhlaka 29 ku Agasti njengoba ummeli wakhe ethe kunemibiko eshodayo ethintekayo kulelicala.
UMthimkhulu ubhekene namacala ayisishiyagalombili okubulala ngokungenhloso kanti wonke uyawaphika njengoba athi amabhuleki eveni ayengasebenzi.
Umbiko olindelwe, yilowo oqhamuka kongoti mayelana namabhuleki emoto kanye nokusebenza kwayo ngesikhathi sengozi. Kulengozi kwashona uYolanda Shezi, Bandile Chamu, Sinethemba Chonco, Olwethu Vilakazi, Sinakhokonke Mchunu, Sinenhlanhla Dlamini, Sinenhlanhla Nkomo kanye no Nonzuzo Zuma.
Ingozi yenzeke ngoJanuwari wonyaka owedlule uMthimkhulu yena waze wabekwa amacala ngo Okthoba wonyaka owedlule.
Omunye wabazali ongathandanga igama lakhe lidalulwe uthe okubuhlungu ngokuhlehla kwalelicala ukuthi abakabi nazo izimpendulo. “Namanje asikazi ukuthi yini eyaholela ekutheni kushone izingane zethu, uma lelicala lilokhu lihlehla asikutholi ukuthi sisivale lesigaba siqhubeke nezimpilo zethu. Kuhamba kancane ukuqulwa kwecala kanti silindele ubulungiswa,” kusho umzali.
Khona manjalo iMaritzburg Echo ithole ukuthi ngoMsombuluko wokuvulwa kwezikole kunabafundi abathathu bakusona lesikole abalimale engozini yemoto KwaPata. USihlalo wesigungu esingamele isikole uMnuz Botsotso Mahlaba usiqinisekisile lesigameko wathi labafundi bebehamba ngemoto encane. “Ngenhlanhla akekho umfundi oshonile kulengozi bangeniswe esibhedlela babe sebededelwa,” kusho yena. Uthe iyabakhathaza kakhulu indaba yokubandakanyeka kwabafundi ezingozi zomgwaqo njengesikole.